Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Fiara mpamono afo vaovao 1 an'ny seranam-piaramanidina Frankfurt ankehitriny
Febroary 16, 2021
Ny tobin-tsolika vaovao 1 dia nanomboka niasa tao amin'ny CargoCity South Airport Airport tamin'ny volana febana 2021
Misokatra ao amin'ny CargoCity South ny toeram-pivarotana matihanina amin'ny serivisy ho an'ny seranam-piaramanidina
Tanteraka ny foto-kevitra telo
Nohatsaraina ny fiarovana ny tranokala seranam-piaramanidina iray manontolo
Taorian'ny fanamboarana efa ho roa taona sy tapany, Seranam-piaramanidina Frankfurtny tobin'ny mpamono afo vaovao 1 (FRA) voalohany dia nanomboka niasa tao amin'ny CargoCity South tamin'ny volana feb 2021. Miorina amin'ny tranokala 2.1 hektara, mitambatra asa maro ao ambanin'ny tampon-trano iray ny tranobe tranobe: ao anatin'izany ny tobin'ny mpamonjy voina fiarovana ny fiaramanidina sy tranobe, ny Ivotoerana fiofanana momba ny afo, ny fisorohana ny afo, ny faritra fanabeazana, ny atrikasa, ny birao, ary ny efitrano fialan-tsasatra sy fanaovana fanatanjahan-tena. Ny lalam-piofanana iray mitambatra dia ahafahan'ny mpamonjy voina manao akanjo feno miaraka amin'ny saron-drivotra mba hanamarinana matetika ny fahaizany sy ny fifohana rivotra.
Olona iraika amby telopolo no miasa mandritra ny ora ao amin'ity trano maoderina ity. Miaraka amin'ny efitrano fanovana, lamba fanasan-damba, atrikasa famelomana aina ary efitrano fialan-tsasatra 33, ahitana garazy handraisana kamiao mpamono afo 18 lehibe. "Ity tobin'afo vaovao ity dia haitao ara-teknika ary manambatra asa maro lehibe," hoy i Annette Rückert, izay mitarika ny sampana misoroka afo Fraport AG.
Ilay ivon-toeram-piofanana mpamono afo (FTC) mifampitohy koa dia mirehareha amin'ny endri-javatra manokana: toy ny tetezana fiofanana mirefy 8.5 metatra, 30 metatra ny halavany hanampiana ireo mpamono afo vaovao ho zatra ambony ary hanao fanazaran-tena amin'ireo asa famonjena. Ho fanampin'izany, tilikambo avo metatra 23 metatra dia miaraka amina mpamorona setroka ho fanahafana ny trano mirehitra lava. "Ny toerana fanazaran-tena efa fanaontsika dia mamela anay hampiofana ireo mpamono afo amin'ny ho avy amin'ny toe-javatra azo antenaina ary hanomana azy ireo amin'ny asany tsara", hoy ny fanazavan'i Rückert.
Amin'ny alàlan'ny fananganana an'io tobim-piantsonana vaovao io any atsimon'ny seranam-piaramanidina sy ny fahavitan'ny fanavaozana ny tobin'afo misy 2 any avaratra ankehitriny, ny isan'ny tobin'afo ao amin'ny FRA dia hahena hatramin'ny efatra ka hatramin'ny telo. Ny biraon'ny mpamono afo taloha 1 sy 3 dia noroahina. Fire station 4, izay nanomboka niasa rehefa notokanana ny Runway Northwest Runway tamin'ny 2011, dia hatao hoe tobin'ny mpamono afo vaovao 3. Ny fihenan'ny isan'ny tobin'afo dia hampitombo ny fahombiazan'ny tobin'ny mpamono afo ao amin'ny seranam-piaramanidina. Azo atao tsara ny mametraka ny mpiasa mora miovaova ary mampihena ny fahasarotan'ny asa, sady manamora ny fanofanana anatiny sy ny fifandraisana. Nanampy i Rückert: "Ny fotokevitra vaovao dia tsy vitan'ny hoe tsy mamela antsika hanohy hihaona amin'ireo fotoana famaliana takiana amin'ny ara-dalàna manerana ny seranam-piaramanidina, fa koa hiarovana ireo faritra manokana ary hahomby kokoa aza."
Misaona an'i Etazonia Travel Arne Sorenson fa maty i Etazonia
Herinandro fitsangatsanganana arabo: mifantoha amin'ny fanarenana ny fizahan-tany